Zizofakelwa i-WI-FI izikole ezibe nemiphumela emihle eNkandla | News24
Zizofakelwa i-WI-FI izikole ezibe nemiphumela emihle eNkandla
eThekwini - Izikole ezithole imiphumela emihle kamatikuletsheni eNkandla zizothola i-WI-FI.
Lobu buchwepheshe be-internet bozosiza kakhulu abafundi kwezokuxhumana nokuthola ulwazi olusheshayo ukuze balekeleleke ezifundweni zabo.
Lokhu kuvezwe yiMeya yaseNkandla uThami Ntuli ngesikhathi kuklonyeliswa abafundi abenze kahle enkundleni yezemidlalo kuleli dolobha.
Abafundi abasebenze ngokuzikhandla futhi baphumelela kahle bathole imifundaze yokuya emanyuvesi, ama-laptop kanye ne-wifi. Ezikoleni ezenze kahle eNkandla, lobu buchwepheshe be-internet buzosiza kakhulu abafundi abangakwazi ukufinyelela kwezokuxhumana njengoba kulindeleke ukuthi busebenze ekupheleni kukaFebhuwari kulo nyaka.
Lokhu kushiwo uNtuli ngesikhathi kumukeliswa abafundi abenze kahle ngoLwesihlanu eNkandla Indoor Sport Center.
Lobu buchwepheshe sebufakwe ezindaweni eziningi, okubalwa kuzo imatapoyolwazi kanye nasemadolobheni amaningi. Nendawo yaseNkandla ayisalanga ngaphandle, njengoba le i-internet izofakwa ezikoleni ezenze kahle kule ndawo okubalwa kuzo iBizimali, iVelangaye, iLushaba kanye neBhuqwini zonke ezingezamabanga aphezulu.
“Eminyakeni emine eyedlule saqala lolu hlelo lokuklomelisa abafundi, singumasipala sabona ukuthi kukhona la esingalekelela khona ukuze kushintshe izimpilo zabafundi. Kubo bonke ebebefake izicelo zonke zamukeliwe lokho kuchaza ukuthi akekho umfundi ovalelwe ngaphandle kulolu hlelo. Yingakho sizofaka i-wifi kulezi zikole ezenze kahle,ukuze nabanye abafundi abalandelayo bezokwazi ukuthola i-internet,” kusho uNtuli.
Nakuba lobu buchwepheshe bezokuxhumana kwezinye izindawo abafundi bebusebenzisa ngendlela engalungile, efana nokuthi bagcine sebebuka ucansi udede kanye nezinye izinto ezingalungile, kodwa imeya ithe bazokwenza ngokusemandlelni abo ukuthi abafundi bayisebenzise ngendlela elungile i-internet.
Omunye wabafundi ofunda eLushaba High School uSamkelo Shozi, 16 ,oyofunda umatikuletsheni kulo nyaka ,ukujabulele kakhulu ukuthi sebezokwazi ukusebenza i-nternet kwezinye izifundo ezidinga ucwaningo.
“Sijabula kakhulu ngokuthi sesizokwazi ukuthola i-internet, besihamba ibanga elide siya edolobheni kodwa manje sekuzobalula. Sibonga umasipala, siyafisa ukuthi lungapheli futhi lolu hlelo lwemifundaze ukuze nathi sizokwazi ukuhlomula ngonyaka ozayo siye emanyuvesi” kusho uShozi.
Inkandla ibalwa nabanye omasipala abenze kahle kumatikuletsheni njengoba iBhuqwini ithole u-97,56 %, lokho kuyenze yaphuma isibili kwi-King Cetshwayo District.